Fifidianana loholona: efa maka bahana ny TGV - ewa.mg
News - Fifidianana loholona: efa maka bahana ny TGV
Miasa mangina ary efa maka bahana
amin’ny fiaingana. Nambaran’ny mpitantana iray eo anivon’ny
TGV/Mapar, omaly, fa efa miomana amin’ny hiatrehana ny fifidianana
loholona izy ireo amin’izao fotoana izao. Efa napetraka ny
mason-tsivana amin’ny ho kandidà harotsaka amin’izany, araka ny
nambarany. “Tsy maintsy mba mpikambana eo anivon’ny TGV/Mapar
sy tia tanindrazana ary olon’Andriamanitra. Tia manampy ny hafa ary
vonona hiaro ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka
malagasy…”, hoy izy. Nohitsiny fa hanana kandidà amin’ireo
faritany enina izy ireo amin’izao fifidianana loholona izao.
“Ho hita eo ihany ary hampahafantarina ny kandidà atolotray
amin’ny fotoana mahamety azy…”, hoy ihany izy.
Tsiahivina fa hanomboka, afaka 14
andro, ny 28 septambra ka hatramin’ny 12 oktobra izao, ny
fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina eny anivon’ny
L’article Fifidianana loholona: efa maka bahana ny TGV a été récupéré chez Newsmada.
Fandrobana tokantrano :: Nentin’ireo jiolahy ny mpitsabo mpanampy sy ny rahalahiny
Nitrangana fanafihana sy fakàna an-keriny tany Teirepoko-Tsarahasina, any Port Bergé, afak’omaly alina. Voaroban’ny jiolahy ny vola fito hetsy ariary tao amin’ireo trano notafihiny, sady nentin’izy ireo niaraka taminy ihany koa ny lehilahy iray mpitsabo mpanampy any an-toerana sy ny rahalahiny. “Tokony ho tamin’ny 10 ora, tamin’ny alin’ny alahady teo nitrangan’izao fanafihana izao. Niditra an-keriny tamin’ireo trano miisa telo ny andian-dehilahy manodidina ny roa ambin’ny folo mitondra basy. Nopotipotehin’izy ireo ny entana izay tsy zakany tao amin’ireo trano. Ora maro taorian’ ny fanafihana, rehefa tafatsoaka izy ireo, vao niantso ny havan’ireo mpitsabo mpanampy nitaky vola zato tapitrisa ariary ho sandan’ny famotsorana azy roa lahy”, hoy ny loharanom- baovao avy amin’ny zandarimaria any an-toerana. Misy manamboninahitra roa avy amin’ny Zandarimaria miaraka amin’ireo zandary marobe nidina any an-toerana nanenjika an’ireto mpaka an-keriny ireto, tamin’io alina io ihany, vantany vao heno ny zava-nisy. Voalaza fa efa nampandrenesina ireo tobin’ny Zandarimaria amin’ny faritra manodidina ka samy miambina ny kizony daholo ny rehetra, omaly. L’article Fandrobana tokantrano :: Nentin’ireo jiolahy ny mpitsabo mpanampy sy ny rahalahiny est apparu en premier sur AoRaha.
Ahiahy hain-trano :: Setroka afon-dakozia nampikoropaka tetsy Ambodifilao
Setroka mainty nateraky ny afo tao an-dakozia no noheverina fa trano may ka nanaitra ny olona teny Ambodifilao, omaly antoandro. Tonga teny an-toerana mihitsy ny avy amin’ny sampana mpamonjy voina. Tsy nisy akory anefa ny fahamaizana. Taitra ny olona teny Ambodifilao sy ny manodidina tamin’ny fisian’ny setroka nidonaka tao amina trano iray teo ampitan’ny toeram-pisakafoanana Zaimaika. Tsy niandry ela ny sampana mpamonjy voina, teny Tsaralalàna, vantany vao naheno ny antso vonjy, fa nidina teny avy hatrany. Kamiao roa lehibe famonoana afo no nahetsika sy nalefa teny an-toerana. Fantatra, taorian’izay, fa gony sy zavatra hafa no natao kitay nandrahoana sakafo tao amin’io trano io ary nahatonga ny setroka sy ny lelan’afo. Nampitandremina ny tompon-trano ho fisorohana ny loza mety haterak’ireo zavatra narehitra. L’article Ahiahy hain-trano :: Setroka afon-dakozia nampikoropaka tetsy Ambodifilao est apparu en premier sur AoRaha.
Fanatsarana ny fotodrafitrasa eny Ambondrona: nesorin’ny kaominina ireo tsatoby anaty arabe
Niroso tamin’ny fanesorana ireo tsatoby teny anaty arabe, famandrihana « parking » etsy Ambondrona sy ny manodidina, ny kaominina Antananarivo, omaly. Nanatanteraka izany ny avy ao amin’ny ekipan’ny departemanta misahana ny fitaterana. « Sarotra ny mitady ny “parking” miakatra amin’iny Ambondrona sy i Faravohitra iny ka ezahina ny hanalalahana ny lalana ho fifampitsinjovana. Feno tsatoby, anaovan’ny olona fiantsonana, ny lalana amin’iny faritra iny. Tsy azo ekena izany fa mila maka fahazoan-dalana aty amin’ny kaominina Antananarivo ny fanaovana izany na azo atao na tsia ary mbola mandalo vaomiera manokana », hoy ny fanazavan’ny talen’ny fitaterana, i Bemanana Vigor. Nohitsiny fa tsy eken’ny lalàna ny fandavahana ny arabe ka antony nanesorana ireo tsatoby, tsy nahazoana alalana tamin’ny CUA. Manomboka izao, “plaque mobile” no hapetraka rehefa mahazo “parking reservé” avy amin’ny CUA. Mitohy hatrany ny fanalana ireo tsatoby tsy ara-dalàna ary efa nisy ny fampilazana mialoha amin’izao hetsika izao.Synèse R.L’article Fanatsarana ny fotodrafitrasa eny Ambondrona: nesorin’ny kaominina ireo tsatoby anaty arabe a été récupéré chez Newsmada.
Fizarana fanampiana : mandray andraikitra ny MJS
Manampy ny fitondram-panjakana hizarana ireo fa­nampiana ho an’ny vahoaka ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Amin’ny maha minisitra mpiahy an’i Toliara an’andriamatoa Tinoka Roberto, izy no mitarika ny fizarana ny Vatsy tsinjo sy ny Tosika fameno ho an’ny mponina any an-toerana. Tonga tany an-toerana ny filoha Rajoelina mivady nanokatra ny fizarana, ny alakamisy teo. Tetsy ankilany, mandray ny andraikiny ny minisitra Tinoka Roberto sy ireo olom-boafidy rehetra. Fokontany 41 ny ao an-tampon-tanànan’i Toliara ka ny efatra amin’ireo no nisantarana ny fizarana. Tsy ho diso anjara ihany koa ireo kaominina manodidina an’i Toliara fa hahazo fanampiana avokoa. Ankoatra izany, mandray ny andraikiny ihany koa ireo mpiasa rehetra ao amin’ny MJS eto Antananarivo. Ma­nampy amin’ny famolavolana ny lisitr’ireo tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka ny fo­kotany valo ao amin’ny boriborintany faha-6 izy ireo miaraka amin’ny DRJS Analamanga.Mi.RazL’article Fizarana fanampiana : mandray andraikitra ny MJS a été récupéré chez Newsmada.